अफगानिस्तानका महिलाहरु : मिनी स्कर्टमा घुम्नेदेखि बुर्कामा कैद हुनु पर्नेसम्मको जीवन « News24 : Premium News Channel
अफगानिस्तानका महिलाहरु : मिनी स्कर्टमा घुम्नेदेखि बुर्कामा कैद हुनु पर्नेसम्मको जीवन
काठमाडौं । तालिवानले अफगानिस्तानको काबुल शहर कब्जा गरेपछि केही तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थालेका छन्।
यसै क्रममा केही पुराना तस्वीरहरु पनि देखिएका छन्। तीमध्ये केही युवा महिलाहरु काबुलको सडकमा मिनी स्कर्ट लगाएर हिडेका तस्वीरहरु बाहिरिएका छन्।
ती तस्वीहरु सन् १९७० को दशकको बताइएको छ । ती पोस्ट गर्नेहरु यो भन्नको लागि कोशिश गर्दै छ कि आफगानिस्थानमा अधिकांश मानिसहरु मुस्लिम परम्पराहरु र रीतिरिवाजहरुबाट घेरिएका छन्, तर एक समयको त्यहाँका महिलाहरुलाई आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकार थियो।
धेरैले १९९६ देखि २००१ सम्म तालिवान शासनको युगलाई पनि सम्झन्छन् जब पुरुषहरुलाई दाह्री बढाउन र महिलाहरुलाई बुर्का लगाउन अनिवार्य गरिएको थियो। तालिवानले टिभी, संगीत र सिनेमामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको र १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका केटीहरुलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब त्यो डरले सबैको मुटु र दिमागलाई घेरिरहेको छ कि तालिवानले उही युग फेरि लैजानेछ। महिलाहरुको हालत उस्तै हुनेछ।
तालिवानको शासनकालमा महिलाहरुमाथि सामाजिक, मानसिक र शारीरिक अत्याचारका कथाहरु चर्चामा आइरहेका छन्, तर त्यहाँका महिलाहरुको हालत सोसल मिडियामा पुराना तस्वीरहरु पोस्ट गरेर व्यक्त गर्ने कोसिस गरीरहेको हो ? भनेर प्रश्न गरिएको छ ।
अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित कबीर तनेजा भन्छन् कि ७० को दशकमा अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकार थियो र त्यहाँ धेरै स्वतन्त्रता थियो। तब काबुलको महिलाहरुको पुराना फोटोहरुले लन्डन वा पेरिसमा रहेको महिलाहरुको फोटो जस्तै देखाउछ ।
समाजको यस्तो तस्वीर अफगानिस्तानको अन्य क्षेत्रहरुमा भने नपाइने जनाइएको छ।
मध्य पूर्व मामिलाका विशेषज्ञ कबीर तनेजाले बीबीसीलाई भने,अफगानिस्तानमा एउटा विभाजन छ। काबुल वा शहरहरुमा बस्नेहरु कमाइरहेका थिए। त्यहाँ आधुनिकता थियो।
त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रहरु र साना शहरहरुमा बसोबास गर्ने जातीय र जनजाति समूहहरु थिए। तालिवानी सोच त्यहाँ पनि थियो। फरक यो थियो कि त्यो सोच अहिले जसरी बाहिर आउँदैन थियो।
इतिहासमा महिला अधिकार
अफगानिस्तानमा महिलाहरुको स्थिति बुझ्नको लागि इतिहासमा हेर्न सकिने जनाइएको छ। अब्दुर रहमान खान, जो १८८० देखि १९०१ सम्म शासक थिए, उनले आफ्नो शासनकालमा महिलाहरुको जीवन सुधार गर्न धेरै काम गरे।
उनले रूढिवादी कानूनमा परिवर्तन ल्याए। जस्तै एक पतिको मृत्युपछि महिलाले उनको भाइसंग विवाह गर्नुपर्ने परम्पराको खतम गरेका थिए । विवाहको उमेर बढ्यो र महिलाहरुलाई केहि परिस्थितिहरुमा समबन्धविच्छेदको अधिकार दिइयो।
महिलालाई उसको बुबा र पतिको सम्पत्तिमा पनि अधिकार दिइएको थियो। अब्दुर रहमानको मृत्यु पछि, उनका छोरा अमीर हबीबुल्लाह खानले सिंहासन सम्हाले र उनका बुबाले लिएका प्रगतिशील कदमहरुलाई अगाडि बढाए।
हुमा अहमदका अनुसन्धान पत्रअनुसार अमीर हबीबुल्लाहले विवाहमा अनावश्यक खर्च गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए र उनकी श्रीमती पहिलो पटक पर्दा बिना पश्चिमी पोशाकमा सार्वजनिक रुपमा देखिएकी थिइन्। उनले पहिलो हबीबिया कलेज खोल्यो जसमा भारत, टर्की र जर्मनी बाट शिक्षकहरुलाई आमन्त्रित गरिएको थयो। पहिलो अस्पताल पनि खुल्यो ।
उनी आफ्नो अनुसन्धानमा लेख्छिन् , अमीर हबीबुल्लाहले अफगान निर्वासितहरुको फिर्ताको बाटो खोलिदिए। यसमा प्रगतिशील विचारक महमूद बेग तारजीको नाम महत्वपूर्ण छ।
सिरिया र टर्कीमा अध्ययन गरेका ताराजी इस्लामिक धर्मशास्त्रलाई आधुनिकतासंग जोड्ने विचारका प्रशंसक थिए। यस सन्दर्भमा, उनले महिलाहरुको समान अधिकारमा जोड दिए, पूर्ण नागरिकताको कुरा गरे, शिक्षित महिलाहरुलाई भविष्यको लागि सम्पत्तिको रूपमा वर्णन गरे र भने कि महिलाहरुको समान अधिकार इस्लाममा वर्जित छैन।
हबीबुल्लाहको हत्यापछि, उनका छोरा अमानुल्लाहले आदिवासी संस्कृतिको कानूनबाट महिला स्वतन्त्रताको कुरा गरे। अमानुल्लाहले सार्वजनिक रूपमा पर्दा, बहुविवाहको विरोध गरे र काबुल र यसका वरपरका क्षेत्रहरुमा केटीहरुको शिक्षामा जोड दिए।
अमानुल्लाहले एक सार्वजनिक समारोहमा भने कि इस्लामले महिलाहरुलाई आफ्नो शरीर ढाक्न र कुनै विशेष प्रकारको नकाब लगाउनु पर्दैन।
एजेन्सी । स्पेनको क्यानरी टापुमा आएको ज्वालामुखीले करिब २० घरहरू ध्वस्त पारेको स्थानीय अधिकारीहरूले सोमबार
एजेन्सी । चीनमा एक आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । केन्द्रीय
पारुको स्वर रहेको यो माया होइन ? सार्वजनिक (भिडियो)